ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုပေါ်မူတည်ပြီး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အနုပညာကုထုံး လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုး - Lifestyle Myanmar
ဘယ်လိုအနုပညာကုထုံးက သင့်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာလဲ? တစ်ခါတစ်ရံ သင့်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေက သင့်ခေါင်းထဲကို ရောက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်အတွေးတွေက တစ်နာရီကီလိုမီတာ ၁၀၀နှုန်းနဲ့ ပျံနေပြီး သင့်ဦးနှောက်က ပေါက်ကွဲတော့မလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်လာရင် အနုပညာကုထုံးအချို့ကို လုပ်ကြည့်ရမယ့်အချိန်ပါပဲ။
အခြေခံအကျဆုံးအနေနဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပြင်ဆင်မှုက ခဲတံနှင့် စာရွက်တစ်ရွက်ယူပြီး ပုံဆွဲဖို့ပါ။ သင်ဆွဲတဲ့အရာက အရေးမကြီးပါဘူး။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း သင့်အတွေးတွေ သဟဇာတဖြစ်လာပြီး စိတ်အေးချမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကဲ…emotions တွေများနေရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ?
၁။ ပင်ပန်းနေသလို ခံစားရရင် ပန်းပွင့်ပုံဆွဲပါ
၎င်းက သင့်စိတ်ကို ပြည်လည်အားဖြည့်ပေးပြီး ဦးနှောက်မြူတွေကို ရှင်းလင်းစေပါတယ်။
၂။ ဒေါသဖြစ်နေရင် မျဉ်းကြောင်းတွေဆွဲပါ
သင်ခံစားနေရပုံကိုသရုပ်ပြဖို့ (စိတ်ခံစားမှုများစွာပါတဲ့ အနုပညာတစ်ခုရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးရှုထောင့်ဖြစ်သော) ရိုးရှင်းတဲ့လိုင်းတွေကိုဆွဲပါ။
၃။ နာကျင်မှုခံစားနေရင် ပုံစံငယ်တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖော်ပြဖို့ ကူညီပေးပြီး ပျော်ရွင်မှုနှင့် အေးဆေးငြိမ်သက်မှုကို ခံစားရစေပါတယ်။
၄။ ပျင်းနေရင် စက္ကူတစ်ရွက်မှာ ရောင်စုံခြယ်နေပါ
အရောင်ဆိုတာက relax ဖြစ်ဖို့နှင့် ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဝမ်းနည်းနေရင် သက်တံ့ခြယ်ပါ
ပျော်ရွင်စရာအရောင်တွေက သင့်စိတ်ထဲက ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်။
၆။ ကြောက်နေရင် ချည်ထိုးပါ
ထပ်ခါတလဲလဲနဲ့ စည်းချက်ညီညီလှုပ်ရှားရတဲ့ သိုးမွေးထိုးခြင်းက စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ငြိမ်သက်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေပါတယ်။
၇။ စိတ်ပူပန်နေရင် အရုပ်ချုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ဒေါသတွေ (သို့) စိုးရိမ်မှုတွေကို သက်မဲ့အရာဝတ္တုတစ်ခုထဲသို့ လွှဲပြောင်းပါ။
၈။ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေရင် စက္ကူဖြဲပါ
စာရွက်တစ်ရွက်ကို ဆုတ်ဖြဲနေပါ။ ၎င်းက ဒေါသခံစားရတဲ့အခါတိုင်း ဖြေလျှော့ပေးတဲ့ သင်္ကတအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
၉။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိနေရင် origami ခေါက်ပါ
ဒီဇိုင်းတစ်ခု ပေါ်လာတာနှင့်အမျှ သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကို ခံစားရစေပါတယ်။
၁၀။ တင်းကျပ်နေရင် ပက်တန်တွေဆွဲပါ
Patterns တွေဆွဲခြင်းက စကားလုံးတွေထည့်ဖို့ ခက်ခဲသော စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြဖို့ ကူညီပါတယ်။
၁၁။ လွမ်းဆွတ်သတိရနေရင် ဝင်္ကဘာတစ်ခု ဆွဲပါ
၎င်းက သင့်ရဲ့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ စိတ်ခံစားမှု အတားအဆီးတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့နှင့် စိတ်သက်သာရာရဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၁၂။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေရင် ပုံတွဲ (သို့) ပန်းချီကားဆွဲပါ
၎င်းက စိတ်ပျက်အားလျော့မှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ပိုမိုခံနိုင်ရည် ရှိလာစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၁၃။ စိတ်အားငယ်နေရင် သင့်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကို ဆွဲပါ
၁၄။ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရင် indian Mandala တစ်ပုံဆွဲပါ
သင့်ရဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကို ရှင်းလင်းပေးပြီး ဖြေလျှော့ပေးဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့ မင်ဒဲလားကို တရားမှတ်တဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် သိကြပါတယ်၊။
၁၅။ သင့်ရဲ့ခွန်အားကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ရှုခင်းပန်းချီရေးဆွဲပါ
ပန်းချီဆွဲခြင်းက သင့်ဦးနှောက်ထဲက ဖန်တီးမှုအရည်တွေကို စီးဆင်းစေတာကြောင့် နုံးချည့်မှုကို ခံစားရတဲ့အခါ သင့်အာရုံကြောတွေကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စေပါတယ်။
၁၆။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို နားလည်ဖို့အတွက် Self-portrait ပန်းချီဆွဲပါ
သင့်ရဲ့ပုံတူပန်းချီက သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ခံစားချက်တွေကို တွေ့ရှိဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်၊ အနာဂတ် self-portrait ဖန်တီးတာက အနာဂတ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၇။ သင့်အတွေးတွေကို စနစ်တကျထားဖို့ ပျားလပို့ (သို့) စတုရန်းပုံတွေ ဆွဲပါ
ဆဲလ်တွေ (သို့) စတုရန်းပုံတွေဆွဲခြင်းက သင့်အတွေးတွေကို စနစ်တကျထားခြင်းဖြင့် ခက်ခဲသော အခြေအနေတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
၁၈။ မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်စေဖို့ လှိုင်းတွေနဲ့ စက်ဝိုင်းပုံတွေ ဆွဲပါ
စက်ဝိုင်းပုံတွေ ဆွဲခြင်းက စည်းလုံးမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရရှိစေဖို့ ကူညီပါတယ်။
၁၉။ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ အပြောင်းအလဲမရှိသော အလုပ်ထဲမှာနစ်နေရင် ဝဲကတော့ပုံဆွဲပါ
သင့်အတွေးတွေနဲ့ ဘဝတိုးတတ်မှုကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရရှိပါလိမ့်မယ်။
၂၀။ အရေးကြီးဆုံး ရည်မှန်းချက်ကို နားလည်ဖို့ ပစ်မှတ်သင်္ကတတွေ ဆွဲပါ
သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေပေါ်မှာ focus ထားဖို့ နားလည်အောင် ကူညီပါတယ်။